Union Minister U Kyaw Tin attends inauguration ceremony of new ASEAN Secretariat building – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Union Minister also attended the opening of new ASEAN Gallery together with other ASEAN Foreign Ministers and handed over one Myanmar traditional lacquer-ware to be displaced at the ASEAN Gallery to the Secretary General of ASEAN.
The first ASEAN Secretariat building in Jakarta was officiated by President Soeharto in 1981. The new Secretariat building comprises two 16-storey towers withatotal of 30 meeting rooms and it will accommodate more ASE-AN Meetings in the future.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်တင် ဂျကာတာမြို့ရှိ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး အဆောက်အဦသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်ဒ်နို မာဆူဒီ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့ တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး အဆောက်အဦသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့၊ နံနက် ၈ နာရီအချိန်တွင် အာဆီယံ အဆောက်အဦသစ်၏ Nusantara ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို တက်ရောက်ချီးမြှင့်သည်။ အခမ်းအနားတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ရက်ဒ်နို မာဆူဒီ က အဆောက်အဦသစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဦးစွာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဒါတိုလင်ကျောက်ဟွိုင်း၊ အာဆီယံ လက်ရှိ ဥက္ကဌ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒွန် ပရာမွတ်ဝိနိုင်းနှင့် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုတို့က အဖွင့်မိန့်ခွန်းများ အသီးသီးပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်၍ သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုက အဆောက်အဦသစ်၏ ကဗျည်းကျောက်ပြားပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆောက်အဦသစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အထိမ်းအမှတ်သော့သင်္ကေတကို အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုသည် အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသော အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အခြားအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့်အတူ အဆောက်အဦသစ်ရှိ အာဆီယံလက်မှုပညာပြခန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြခန်းတွင်ပြသထားရှိရန်အတွက် မြန်မာ့ရိုးရာ ယွန်းဆွမ်းအုပ် တစ်ခုကို အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ထံသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ၁၀၃၀ နာရီတွင် အာဆီယံအဆောက်အဦသစ်၏ Nusantara ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၅၂)နှစ်မြောက် အာဆီယံနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားသို့ အခြား အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့်အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင် အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီးနောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများက အာဆီယံခေါင်းဆောင်အသီးသီး၏ ၂၀၄၂ ခုနှစ်ကာလအတွက် အာဆီယံ၏ အနာဂတ်ဆိုင်ရာ ကြိုတင်မျှော်မှန်းချက်စာလွှာများကို နှစ်ရှည်ခံသတ္တုဗူး (Time Capsule)တွင် ထည့်သွင်း သိမ်းဆည်းခဲ့ကြသည်။ အာဆီယံ၏ ၇၅ နှစ်မြောက် အခါသမယကျရောက်မည့် ၂၀၄၂ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် နှစ်ရှည်ခံသတ္တုဗူးအတွင်းရှိ အဆိုပါစာလွှာများကို ပြန်လည်ထုတ်ယူကာ ဖတ်ကြားမည်ဖြစ်သည်။
ဂျကာတာမြို့ရှိ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး မူလအဆောက်အဦကို ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ ဆူဟာတိုက ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယခုဖွင့်လှစ်သည့် အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး အဆောက်အဦသစ်သည် အထပ်ပေါင်း (၁၆) ထပ်ရှိ အဆောက်အဦ (၂) ခုတွဲဖြစ်ပြီး၊ အစည်းအဝေးခန်းမပေါင်း (၃၀) ပါရှိသည်ဖြစ်ရာ အာဆီယံအစည်းအဝေးများကို နောင်တွင် အဆောက်အဦသစ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။